KEDU OTU ESI ACHỌPỤTA ADREESỊ MAC GỊ NA OTU ESI AGBANWE YA? - NETWORK NA INTANETI - 2019
Kedu otu esi achọpụta adreesị MAC gị na otu esi agbanwe ya?
Ọtụtụ ndị ọrụ na-echekarị ihe adreesị MAC bụ, otu esi achọta ya na kọmputa gị, wdg. Anyị ga-edozi ihe niile n'usoro.
Kedu adreesị MAC?
Adreesị MAC nọmba njirimara nke ụwa nke kwesịrị ịdị na kọmputa ọ bụla na netwọk.
Ọtụtụ mgbe ọ dị mkpa mgbe ịkwesịrị ịhazi njikọ netwọk. Ekele maka njirimara a, ọ ga-ekwe omume ịmepe ohere (ma ọ bụ nke ọzọ) na otu mpaghara na netwọk kọmputa.
Otu esi achọta adreesị MAC?
1) Site na akara iwu
Otu n'ime ụzọ kachasị mfe na nke kachasị esi chọta adreesị MAC bụ iji usoro atụmatụ iwu.
Iji gbanye akara iwu ahụ, mepee menu "Malite", gaa na "Standard" tab ma họrọ ụzọ mkpirisi chọrọ. Ị nwere ike na "Malite" menu na akara "Run" ịbanye atọ ederede: "CMD" wee pịa "Tinye" igodo.
Ọzọ, tinye iwu "ipconfig / niile" ma pịa "Tinye". Ntube ihuenyo n'okpuru na-egosi otú o kwesịrị ịdị.
Na-esote, dabere na ụdị kadị network gị, chọta akara ahụ a kpọrọ "adreesị ahụ".
Maka nkwụnye netwọk ikuku, a na-egosipụta ya na-acha uhie uhie na foto dị n'elu.
2) Site na nhazi netwọk
Ị nwere ike ịmụta adreesị MAC n'enweghị iji akara iwu. Dịka ọmụmaatụ, na Windows 7, pịa bọtịnụ dị na ala aka nri nke ihuenyo (site na ndabara) wee họrọ "ọnọdụ netwọk".
Mgbe ahụ, na window windo nke netwọk mepee na taabụ "ozi".
Window ga-apụta na-egosi ihe ọmụma zuru ezu banyere njikọ netwọk. Na adreesị "adreesị ahụ", adreesị MAC gosipụtara.
Esi gbanwee adreesị MAC?
Na Windows, naanị gbanwee adreesị MAC. Ka anyị gosi ihe atụ na Windows 7 (na nsụgharị ndị ọzọ n'otu ụzọ ahụ).
Gaa na ntọala ndị na-esonụ: Ogwe njikwa Network na Internet & Njikọ Network. Ọzọ na njikọ netwọk nke na-amasị anyị, pịa aka nri ma pịa Njirimara.
A windo ga-egosi na njikọ njikọ, chọọ "bọtịnụ" ntọala, na-emekarị n'elu.
Ọzọkwa na taabụ anyị na-ahụkwa nhọrọ "Adreesị Network (adreesị netwọk)". Na uru ubi, tinye nọmba 12 (mkpụrụedemede) na-enweghị ntụpọ ma dashes. Mgbe nke ahụ gasịrị, chekwaa ntọala ma malitegharịa kọmputa ahụ.
N'ezie, mgbanwe nke adreesị MAC zuru ezu.
Mmekọrịta netwọk nwere ihe ịga nke ọma!